Loharanom-bola vaovao ilaina hanampiana ny fizahan-tany any Karaiba hiatrika krizy lehibe
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Loharanom-bola vaovao ilaina hanampiana ny fizahan-tany any Karaiba hiatrika krizy lehibe
Tsy maintsy apetraka ny loharanom-bola fanampiny hanampiana ny fizahan-tany Karaiba hiatrika krizy amin'ny ho avy.
Izany dia iray amin'ireo tolo-kevitra ao amin'ny tatitra vaovao momba ny fanadihadiana momba ny vokatry ny Covid-19 momba ny fikambanana fitantanana toerana fivarotana sy fivarotana firenena any amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) sy ny valintenin'izy ireo tany am-boalohany tamin'ny areti-mandringana manerantany, notarihin'ny George Washington University International Institute of Tourism Studies (GW IITS) sy ny CTO.
Ny fanadihadiana dia nahitana fa ny COVID-19 dia nisy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny fikambanan'ireo fizahan-tany, ary saika ny fihenan'ny tetibolam-bolany dia efa nihena avokoa na tsia.
"Fambara ratsy ity," hoy ny tatitra.
Nangataka fisolo vava amin'ny anaran'ny fikambanana ho avy izy ireo hanohanana ara-bola mba hijanonana ho matanjaka ary hanampy amin'ny fitarihana ny ezaka fanarenana sy ny fanarenana ny fizahan-tany.
Nilaza koa izy ireo fa tsy maintsy mitady fomba famoronana ireo orinasa ireo mba hanaovana bebe kokoa amin'ny kely kokoa, indrindra momba ny marketing.
"Mandrosoa, ny fikambanana itodiana dia mila mandinika ny fomba fanamorana ny loharanom-bola, izay mifototra indrindra amin'ny hetra sy ny hetra fitsangantsanganana, hahazoana antoka fa mahazaka onja COVID-19 ho avy izy ireo ary hatairana amin'ny ho avy ny indostrian'ny fizahantany," hoy ny soso-kevitra GW IITS .
Nandritra izany no nilazany fa ny andrim-pizahantany dia mila miambina hatrany ary miaro ny fanohanana hatrany ny orinasan'ny fizahantany raha te hahomby ireo orinasa ireo.
"Raha tsy misy fanampiana ara-bola maharitra, ny orinasa fizahan-tany izay miasa ambany noho ny fahaiza-manao feno dia ho fanamby hijanona amin'ny orinasa hatramin'ny 2020," hoy ny tatitra.
Ho fanampin'ny famatsiam-bola, ny tatitra dia manasongadina ihany koa ny filàna fitantanana krizy mahomby sy ny fifandraisana eo anelanelan'ny fepetra ilaina haingana hanarenana ny fahalanian'ny COVID-19 sy ny fiantraikany amin'ny fizahantany.
Seleni Matus, talen'ny mpanatanteraka ao amin'ny GW IITS dia nilaza fa: "Zava-dehibe ny hiarahan'ny fikambanana eo an-toerana hiara-hiasa amin'ireo governemanta sy orinasa eo an-toerana mba hitady fomba hamoronana fiaraha-miasa amin'ny daholobe sy tsy miankina izay hahasoa ny antoko rehetra tafiditra, manomboka amin'ny hotely, mpandraharaha fizahan-tany ary trano fisakafoanana ka hatrany an-toerana mponina sy mpizahatany - ilaina haingana ny fampiasam-bola. "
Ny fanadihadiana an-tserasera, noforonina sy nodinihan'ny GW IITS, dia notontosaina tamin'ny 6 -22 Mey teo amin'ireo firenena 24 mpikambana ao amin'ny CTO. Ny GW IITS koa dia namorona hetsika fitsangatsanganana fizahantany nanomboka ny volana martsa ka hatramin'ny voalohan'ny volana Mey teo amin'ny fivezivezena, ny fanampiana ara-toekarena, ny fitantanana ny toerana misy azy ary ny fanampiana ny fiaraha-monina, ny fifandraisana amin'ny krizy ary ny varotra toerana.
Ny oniversite koa dia nanadihady ireo tranokala sy fantsona media sosialy misy an'ireo fikambanana marketing isan-karazany, fikambanana ara-indostria ary tranokala atrehin'ireo mpanjifa hahalala tsara ny valin'ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny COVID-19, ary nanangona ny angon-drakitra momba ny fivezivezena sy ny fanampiana ara-toekarena avy amin'ny loharano faharoa.
Firenena telo amby efapolo any Karaiba lehibe, anisan'izany ireo firenena 24 mpikambana ao amin'ny CTO, no tafiditra ao anatin'io singa amin'ny fikarohana io.